ပုဂံရာဇဝငျ ထဲက လူစှမျးကောငျး (၄)ဦးမှာ ကနျြစဈသားနနျးတကျပီးနောကျ ကနျြတဲ့သုံးဦး နောကျဆုံး မှာ ဘာဖွဈသှားကွသလဲ..?( ငထှရေူး၊ ငလုံးလကျဖယျ၊ ညောငျဦးဖီး) – Nyi Ma Lay
ပုဂံရာဇဝငျ ထဲက လူစှမျးကောငျး (၄)ဦးမှာ ကနျြစဈသားနနျးတကျပီးနောကျ ကနျြတဲ့သုံးဦး နောကျဆုံး မှာ ဘာဖွဈသှားကွသလဲ..?( ငထှရေူး၊ ငလုံးလကျဖယျ၊ ညောငျဦးဖီး)
ပုဂံထီးနနျး ကို ကနျြစဈသား ဆကျခံပွီး တဲ့နောကျ နမှေ့ာ ဘဲ ငလုံးလကျဖယျ၊ ညောငျဦးဖီးနှငျ့ ငထှရေူး တို့ ပုဂံကို စှနျ့ခှာပွီး ထှကျပွေးရ တယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ မဏိစန်ဒာနှငျ့ ကနျြစဈသားတို့ ဇာတျလမျးမှာ ဖျောကောငျ လုပျပေးကွ လို့ဖွဈပါတယျ။
ငထှရေူး – အဲဒီအခြိနျက တညငျ လို့ချေါတဲ့ သနျလြှငျကို ပွေးတယျ။ တညငျမှာ မှနျမတဦး နဲ့ ညားပွီးတဲ့နောကျ ထနျးတောတှေ အောကျဈေး နဲ့ လိုကျဝယျပွီး ထနျးရညျတဲ ဖှငျ့တယျ၊ ထနျးညကျခကျြတယျ။ ထနျးရညျကို အပငျပျေါက မခခြငျ လကျပံပှငျ့စိမျပွီး အရသာ ထူးကဲအောငျ လုပျတဲ့ အတှကျ ငထှရေူးရဲ့ ဘုံ ဆိုငျဟာ အတျောဘဲ ရပေနျးစားပါသတဲ့။
ဟိုဒငျးဟိုဟှာ အတှကျ တကယျကောငျးတဲ့.. ဆေးတဈခှကျ လို့ နာမညျကွီးပါသတဲ့။ ပုရိသ ယောကျ ကြားမြားသာမက မိနျးမမြား ကပါ အားပေးကွပါ သတဲ့။ ထနျးရညျတနျခိုးနှငျ့ ရှာကွီး နှဈရှာပါ ထပျတိုးလာပါ သတဲ့။ အဲဒီရှာတှကေ ခါးရမျး ( ယနေ့ ခရမျး ) နှငျ့ ကွုံးဟ ( ယနေ့ သုံးခှ) မွို့တှဖွေဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ တံငါသညျ လကျဖယျ ဆိုတဲ့ နာမညျသာ တှငျသှားတယျ၊ စီးပှား မတကျဖူးတဲ့။ ဒါနဲ့ တဈရကျ စိတျတိုတိုနဲ့ သူ ဖမျးထား တဲ့ ငါးရံ့တှကေို ဓားနဲ့ ခုတျပွီး တဲပျေါပဈတငျ လိုကျသတဲ့။ ၃-၄ ရကျကွာလို့ သတိရမှ ပွနျယူကွညျ့တော့ ငါးရံ့သားက ခွောကျသှပွေီ့း ငါးအသားလညျး ကွညျ နတော သတိထားမိပါသတဲ့။
ဒါနဲ့ မီးဖိုထဲ ပဈထညျ့ပွီး စားကွညျ့ရာ ကနေ ငါးရံ့ခွောကျရဲ့ အရသာ ထူးကဲပုံကို မတျောတဆ တှရှေိ့သှား ပါသတဲ့။ ဥသာပဂိုးနယျ မှာ ငါးရံ့ခွောကျ ‘ စ ‘ တာ အဲဒီ ငလုံးလကျဖယျရဲ့ ကြေးဇူးဘဲ။
သူ့ရဲ့ ငါးရံ့ခွောကျဟာ စဈထှကျတဲ့ အခါ ရိက်ခာ ဖွဈလာတယျ၊ ဘုနျးကွီးကြောငျး ကွကျသရတေိုကျထဲ ထညျ့လှူတဲ့ ရိက်ခာဖွဈ လာတယျ။ တညငျ က သူ့မိတျဆှရေငျး ငထှရေူးရဲ့ ဘုံဆိုငျကို လကျဆောငျပေးရာကနေ ငါးရံ့ခွောကျဟာ အမွညျးဖွဈလာတယျ။ ငါးရံ့ခွောကျ လုပျငနျးနဲ့ ကွီးပှားသှားတဲ့ ငလုံးလကျဖယျဟာ မယား ၃ယောကျထပျယူပါသတဲ့။
ငလုံးလကျဖယျ ကုသိမျ မှာ စီးပှားပကျြလို့ ပဂိုးပွောငျးသှားတော့ လိုကျမသှားဘဲ ပငျလယျကူး ကုနျသဘောင်ျပျေါတကျပွီး လှသေမား အဖွဈလိုကျသှားရာက ‘ ကော့ဆောငျ ‘ ဆိုတဲ့ ယနေ့ ကော့သောငျး နရောကို ရောကျလာတယျ။
လှလေုပျသား လုပျရတာ စိတျမပါ၊ စီးပှားရေးလုပျဖို့လညျး စိတျမပါ။ ဒါနဲ့ ရှိတဲ့ ငှလေေးနဲ့ လှေ တဈစီးဝယျ။ ထားဝယျတကျမယျ ဆိုပွီး တကျလာရာက ကော့ဆောငျနဲ့ နီးတဲ့ ကြှနျးနားမှာ ခဏဝငျနားရာက ရခြေိုးနတေဲ့ ဆလုံမကို တှတေ့ယျ။
တဈသကျလုံး လူပြို ကွီး လုပျလာတဲ့ ညောငျဦးဖီးဟာ သံပခြုပျစာ မိသှားတယျပေါ့ဗြာ။ သူလညျး မယား ၃ ယောကျယူတာမှာ အကုနျလုံး ဆလုံမတှကွေီးသာ ရှေး ယူပါသတဲ့။ဒီနေ့ ညောငျဦးဖီးကြှနျးဆိုတာ ကော့သောငျးကနေ ရမေိုငျ ၄၀ အကှာမှာ ရှိပါတယျ။ လိုငျးပျေါမှာ တှလေို့ တဆငျ့ပွနျလညျဖျောပွပါသညျ…..Credit – Zay Myo Lin
ပုဂံထီးနန်း ကို ကျန်စစ်သား ဆက်ခံပြီး တဲ့နောက် နေ့မှာ ဘဲ ငလုံးလက်ဖယ်၊ ညောင်ဦးဖီးနှင့် ငထွေရူး တို့ ပုဂံကို စွန့်ခွာပြီး ထွက်ပြေးရ တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ မဏိစန္ဒာနှင့် ကျန်စစ်သားတို့ ဇာတ်လမ်းမှာ ဖော်ကောင် လုပ်ပေးကြ လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ငထွေရူး – အဲဒီအချိန်က တညင် လို့ခေါ်တဲ့ သန်လျှင်ကို ပြေးတယ်။ တညင်မှာ မွန်မတဦး နဲ့ ညားပြီးတဲ့နောက် ထန်းတောတွေ အောက်ဈေး နဲ့ လိုက်ဝယ်ပြီး ထန်းရည်တဲ ဖွင့်တယ်၊ ထန်းညက်ချက်တယ်။ ထန်းရည်ကို အပင်ပေါ်က မချခင် လက်ပံပွင့်စိမ်ပြီး အရသာ ထူးကဲအောင် လုပ်တဲ့ အတွက် ငထွေရူးရဲ့ ဘုံ ဆိုင်ဟာ အတော်ဘဲ ရေပန်းစားပါသတဲ့။
ဟိုဒင်းဟိုဟွာ အတွက် တကယ်ကောင်းတဲ့.. ဆေးတစ်ခွက် လို့ နာမည်ကြီးပါသတဲ့။ ပုရိသ ယောက် ကျားများသာမက မိန်းမများ ကပါ အားပေးကြပါ သတဲ့။ ထန်းရည်တန်ခိုးနှင့် ရွာကြီး နှစ်ရွာပါ ထပ်တိုးလာပါ သတဲ့။ အဲဒီရွာတွေက ခါးရမ်း ( ယနေ့ ခရမ်း ) နှင့် ကြုံးဟ ( ယနေ့ သုံးခွ) မြို့တွေဖြစ်ပါတယ်။
ငလုံးလက်ဖယ် –သူက ကုသိမ် လို့ ခေါ်တဲ့ ယနေ့ ပုသိမ် ဆိုတဲ့ ဆိပ် ကမ်းမြို့လေး ကို ပြေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာ စီးပွားပျက်ပြီး ဥသာ ဆိုတဲ့ အရပ်ကို ဒိုးပါတယ်။ မြေလည်းဆုံး၊ မယားလည်း ဆုံးတဲ့ ငလုံးလက်ဖယ် ဟာ ဥသာပဂိုး ရောက်တဲ့ အခါ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတဲ့အတွက် လယ်ကွက်တွေ ထဲက ငါးရံ့တွေကိုဖမ်းပြီး တံငါသည် လုပ်ပါသတဲ့။
ဒါပေမယ့် တံငါသည် လက်ဖယ် ဆိုတဲ့ နာမည်သာ တွင်သွားတယ်၊ စီးပွား မတက်ဖူးတဲ့။ ဒါနဲ့ တစ်ရက် စိတ်တိုတိုနဲ့ သူ ဖမ်းထား တဲ့ ငါးရံ့တွေကို ဓားနဲ့ ခုတ်ပြီး တဲပေါ်ပစ်တင် လိုက်သတဲ့။ ၃-၄ ရက်ကြာလို့ သတိရမှ ပြန်ယူကြည့်တော့ ငါးရံ့သားက ခြောက်သွေ့ပြီး ငါးအသားလည်း ကြည် နေတာ သတိထားမိပါသတဲ့။
ဒါနဲ့ မီးဖိုထဲ ပစ်ထည့်ပြီး စားကြည့်ရာ ကနေ ငါးရံ့ခြောက်ရဲ့ အရသာ ထူးကဲပုံကို မတော်တဆ တွေ့ရှိသွား ပါသတဲ့။ ဥသာပဂိုးနယ် မှာ ငါးရံ့ခြောက် ‘ စ ‘ တာ အဲဒီ ငလုံးလက်ဖယ်ရဲ့ ကျေးဇူးဘဲ။
သူ့ရဲ့ ငါးရံ့ခြောက်ဟာ စစ်ထွက်တဲ့ အခါ ရိက္ခာ ဖြစ်လာတယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ကြက်သရေတိုက်ထဲ ထည့်လှူတဲ့ ရိက္ခာဖြစ် လာတယ်။ တညင် က သူ့မိတ်ဆွေရင်း ငထွေရူးရဲ့ ဘုံဆိုင်ကို လက်ဆောင်ပေးရာကနေ ငါးရံ့ခြောက်ဟာ အမြည်းဖြစ်လာတယ်။ ငါးရံ့ခြောက် လုပ်ငန်းနဲ့ ကြီးပွားသွားတဲ့ ငလုံးလက်ဖယ်ဟာ မယား ၃ယောက်ထပ်ယူပါသတဲ့။
တံငါလုပ်ငန်း နဲ့ ကြီးပွားရတာ အပြစ်ကြီးလှတယ် ကောင်းမှု ကုသိုလ် လုပ်ချင်တယ် ဆိုပြီး တွေးမိရာက ဘုရား ၃ ဆူတည်ပြီး လှူတယ်။ အဲဒီ ဘုရား သုံးဆူကို ထိမ်းသိမ်းဖို့ရာ မယားကြီး၊ မယားလတ်၊ မယားငယ် သုံးယောက်စလုံးကို တာဝန်ပေးပါသတဲ့။
အထောက်ထား အဖြစ် အဲဒီဘုရား ၃ ဆူ ဟာ ဒီနေ့ ပဂိုးတက္ကသိုလ် အနောက်ဖက် ကပ်ရက်မှာ ဒီနေ့ထိ ရှိပါသေးတယ်။ ညောင်ဦးဖီး –ရေကြိုက်တဲ့ ညောင်ဦးဖီး ဟာ ပုဂံက ထွက်လာတော့ လူပျိုကြီး။ ငထွေရူးရဲ့ တညင် တလှည့် ငလုံးလက် ဖယ်ရဲ့ ကုသိမ် တလှည့် လိုက်နေတယ်။
ငလုံးလက်ဖယ် ကုသိမ် မှာ စီးပွားပျက်လို့ ပဂိုးပြောင်းသွားတော့ လိုက်မသွားဘဲ ပင်လယ်ကူး ကုန်သဘောင်္ပေါ်တက်ပြီး လှေသမား အဖြစ်လိုက်သွားရာက ‘ ကော့ဆောင် ‘ ဆိုတဲ့ ယနေ့ ကော့သောင်း နေရာကို ရောက်လာတယ်။
လှေလုပ်သား လုပ်ရတာ စိတ်မပါ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လည်း စိတ်မပါ။ ဒါနဲ့ ရှိတဲ့ ငွေလေးနဲ့ လှေ တစ်စီးဝယ်။ ထားဝယ်တက်မယ် ဆိုပြီး တက်လာရာက ကော့ဆောင်နဲ့ နီးတဲ့ ကျွန်းနားမှာ ခဏဝင်နားရာက ရေချိုးနေတဲ့ ဆလုံမကို တွေ့တယ်။
ဗိုက်ဆာလို့ စားစရာတောင်းမိရော။ ဆလုံမကလည်း သူ့နားရှိတဲ့ သံပချုပ် ၃-၄ လုံးလောက် ကောက်ပြီး ကျွေးမိရာက ညောင်ဦးဖီးနှင့် ဆလုံမ ညားကြလေသတည်း။
တစ်သက်လုံး လူပျို ကြီး လုပ်လာတဲ့ ညောင်ဦးဖီးဟာ သံပချုပ်စာ မိသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ သူလည်း မယား ၃ ယောက်ယူတာမှာ အကုန်လုံး ဆလုံမတွေကြီးသာ ရွေး ယူပါသတဲ့။ဒီနေ့ ညောင်ဦးဖီးကျွန်းဆိုတာ ကော့သောင်းကနေ ရေမိုင် ၄၀ အကွာမှာ ရှိပါတယ်။ လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့လို့ တဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်…..Credit – Zay Myo Lin
Previous post ကမ်ဘာ့တဈဖကျခွမျးကို ရောကျသှားသလို သငျ့ကိုခံစားမိစမေညျ့ ဘဝမှာ တခါလောကျတော့ အလညျရောကျဖူးသငျ့တဲ့ ကခငျြပွညျနယျ ပနျဝါမွို့…
Next post ကားလစေဈ ကိုယျတိုငျလဲမယျ ဆိုရငျ ပွုလုပျရမယျ့ သတိပွုသငျ့တဲ့ အဆငျ့မြား